ဤစာမျက်နှာသည် ကြိုတင်ငွေပေးချေစနစ် SIM card လျှောက်ထားခြင်းစာမျက်နှာဖြစ်ပါသည်။
ရက်၃၀ အခမဲ့သုံးစွဲပြီးက ထပ်မံသုံးစွဲရန် ငွေဖြည့်ရပါမည်။
Band 데이터 안심 300MB အကန့်အသတ်မဲ့
300MB (+3Mbps အကန့်အသတ်မဲ့) 36,000won/30days
1. ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် Credit အချက်များသုံးစွဲခွင့်ပြုသည်။ [လိုအပ်ချက်များကို သဘောတူပါသည်။]
1.ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် Credit အချက်များသုံးစွဲခွင့်ပြုသည်။
2. ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို third party အားပေးသိရန် သဘောတူပါသည် [လိုအပ်ချက်များကို သဘောတူပါသည်။]
2.ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို third party အားပေးသိရန် သဘောတူပါသည်
3. အချက်အလက်များကို ကိုယ်စားဖြည့်ပေးခြင်းအား သဘောတူပါသည်။ [လိုအပ်ချက်များကို သဘောတူပါသည်။]
3.အချက်အလက်များကို ကိုယ်စားဖြည့်ပေးခြင်းအား သဘောတူပါသည်။
4. လိုင်းဖွင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်စားလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ကိုယ်စားဖြည့်စွက်ခြင်းအား သဘောတူညီပါသည်။ [လိုအပ်ချက်များကို သဘောတူပါသည်။]
4.လိုင်းဖွင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်စားလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ကိုယ်စားဖြည့်စွက်ခြင်းအား သဘောတူညီပါသည်။
5. သုံးစွဲသူအား အကျိုးရှိစေမည့် သတင်းအချက်အလက် နှင့် ကြော်ငြာများကို စာတိုပေးပို့ခြင်းအား သဘောတူပါသည်။ [ရွေးချယ်ခြင်း]
5. သုံးစွဲသူအား အကျိုးရှိစေမည့် သတင်းအချက်အလက် နှင့် ကြော်ငြာများကို စာတိုပေးပို့ခြင်းအား သဘောတူပါသည်။
[ရွေးချယ်ခြင်း]သဘောတူညီချက်အားငြင်းဆိုနိုင်သည်။ ငြင်းဆိုမှုကြောင့် ဆိုးကျိုးတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါ။
သတ်မှတ်ချက်အသေးစိတ်အားကြည့်ရန် View ကိုနှိပ်ပါ။
Passport နံပါတ် *
လိုင်းဖွင့်ခြင်းရလဒ်နှင့် သုံးစွဲမှုနည်းလမ်းအား ပြန်လည်ပေးပို့ပေးပါမည်။